T-WORK SYSTEM, Author at T-WORK SYSTEM
Software Company in Mandalay
Posts by T-WORK SYSTEM
T-WORK HOSTING PLAN
By T-WORK SYSTEM | October 9, 2020 | 0
သင့် ကိုယ်ပိုင် Website များ လွှင့်တင်ရန် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာ တစ်ခုရှာနေပါသလား..? ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး (၅) နှစ်တိုင်တိုင် ရပ်တည်ခဲ့သည့် T-Work System မှ -လုံခြုံမှုမြင့်မားသော Virtual Private Server များ – Web Server အား Digital Attacks များမှကာကွယ်ရန် AI နည်းပညာ အသုံးပြုထားသော Immunify 360 -Domain-Validation Certificate ပါဝင်ခြင်း -Data များထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူစိတ်ချရသော Cloudlinux နှင့် Plesk များ ပါဝင်သည့် Web-Hosting Service များ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်လိုအပ်ချက်များအပေါ် စိတ်ကျေနပ်ပြည့်ဝသည့်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ပြည်တွင်း Company တစ်ခုပါ။အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာ…
By T-WORK SYSTEM | September 3, 2020 | 0
Online Shopping လုပ်ကိုင်နေသူလား..? လူကြီးမင်း Online Business အတွက် ကိုယ်ပိုင် Website ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား..?နိုင်ငံတော်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်အရ လူကြီးမင်း Online Business မှာ Website တခုရှိကို ရှိရတော့မှာပါဒီအတွက် ဘာတွေများ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ..? မဖြစ်မနေ ကိုယ်ပိုင် Website တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပေမယ့် Website တခုကနေ ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ..-လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိလာမယ် ပိုမိုထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ် ဖောက်သည် အသစ်တွေကို ပိုမို ဆွဲဆောင်လာနိင်မယ် လုပ်ငန်းအတွက် ဈေးကွက် အသစ်တွေ ချဲ့ထွင်လာနိုင်မယ် ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်လာပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်တွေ ပိုမို စနစ်ကျလာမယ်ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကို အားမာန်အပြည့်နဲ့ စိန်ခေါ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Online Business ကိုချဲ့ထွင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ T-Works System မှ…
By T-WORK SYSTEM | August 22, 2020 | 0
သင်သာ E-Commerce Website တခုကို ပိုင်ဆိုင်ရရင် ဘယ်လိုအကျိူးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲ -သင်ရဲ့Products များကို Facebook Pageလို ရှုပ်ပွမနေဘဲ Category အလိုက် ခွဲခြားကြည့်ရှုနိုင်ခြင််း -Customers များ ဘက်မှ 24/7 ဝယ်ယူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း -24/7 အော်ဒါမှာယူနိုင်ခြင်း -ငွေပေးချေမှုစနစ် လွယ်ကူခြင်း -Pageတွေမှာ ရောင်းချခြင်းထက် Customer ဘက်မှ Website ကို ယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း သင့်၏ စျေးကွက်ကို နိုင်ငံတကာ အထိ ထိုးဖောက်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိခြင်း စသဖြင့်အကျိူးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါတယ် သင်တို့လုပ်ငန်းပိုင်းအတွက် #IT ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM က အဆင်သင့်ရှိနေပါပြီ။ HotLine:09-965 088114
By T-WORK SYSTEM | August 10, 2020 | 0
တလ တသောင်းကျပ် အသုံးပြုရုံဖြင့် T-WORK Hosting 1GB plan ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး 20GB SSD Storage လည်း ရရှိမှာပါနော် Email Account လည်း အကန့်အသတ်မရှိ ဖန်တီးနိုင်ပါပြီDatabase2ခု တည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီးSecurity ပိုင်းတွင်လည်း Secured by Imunify 360 ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် Page builder ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် drag & draw စနစ်ဖြင့် content နဲ့ photos များကို လိုသလို ဖန်တီးနိုင်ပါပြီထို့ပြင် Website တခုလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Control Panel တခု ပေးထားဦးမှာပါ သင်တို့လုပ်ငန်းပိုင်းအတွက် #IT ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ T-WORK…
By T-WORK SYSTEM | July 29, 2020 | 0
Online shopsများအတွက် Performance အမိုက်ဆုံးနှင့် စျေးအသက်သာဆုံး E-Commerce Platform သင့်Online Shopကို ခေတ်နှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရန် အချိန်ရောက်ရှိပါပြီ Computer တစ်လုံးနှင့် အချိန်မိနစ် 90 ခန့်ပေးရုံဖြင့် အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုကို စတင်တည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ အွန်လိုင်းစတိုးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်သုံးချက်ကတော့ နံပါတ်တစ် Domain Name (eg. storename.com) နံပါတ်နှစ် Web Hosting နှင့် နံပါတ်သုံး SSL Certificate တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Domain Name ဆိုတာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ သင်၏ အွန်လိုင်းစတိုးလိပ်စာ (Website’s Address) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ သင်၏ဈေးဆိုင်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေစေနိုင်ရန်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှိသမျှ Websiteအားလုံးသည် WebHosting မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ နေရာတစ်ခုကို ဝယ်ယူကာ Website…
Beautiful Websites for You
By T-WORK SYSTEM | July 22, 2020 | 0
အလှဆုံးWebsite တွေ မင်း ဖန်တီးလိုက်ပါ📷 Website ဆိုတာ၂၄နာရီ ဝင်ကြည့်နိုင်ခြင်းကြောင့် Customerတွေ အတွက် အချိန်မရွေး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် 👉 Facebook Page မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက အောင်မြင်နေပြီး ကိုယ့်Product တွေအကြောင်းကိုလည်း Customer တွေက သိနေပြီးဖြစ်တဲ့အချိန် ဆိုပါတော့။ အဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Page ကသာ မတော်တဆပျက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းDataတွေ ကိုယ့်ဖောက်သည် Customer တွေရဲ့ Data တွေကို ပြန်လည်ဆည်ယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ❌ 👉 ဟုတ်ပြီ။ အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုထိန်းနိုင်တဲ့အရာကို ပြောပါဆိုရင် Website ကိုပဲ ညွှန်းရပါလိမ့်မယ်။ Website က မတော်မဆပျက်ခဲ့သည်ရှိသော် Data တွေကို ပြန်လည်ရယူပေးနိုင်ပါတယ်။ Website နဲ့ Social Media…
© Copyright 2018 T-WORK SYSTEM Co.,Ltd. All right reserved.